SALDHIGGA SALDHIGA SU'AALAHA: SIDA LOO DOORTO NIDAAMKA BIYAHA - INFRASTRUCTURE
Sida loo doorto xarun bamgareynaysa si loo siiyo
Wixii waraabinta dhirta aagga dambe, biyaha laga bilaabo ceelasha ugu dhow, tiirarka, iyo kaydadka dabiiciga ah ayaa inta badan la isticmaalaa, iyagoo rakibaya bamka la soo gudbiyo haddii loo baahdo. Hase yeeshee, haddii aysan aqallada ku xirnayn nidaamka biyaha ee dhexdhexaadka ah, markaa waa lagama maarmaan in la xalliyo arrinta biyaha ee dhismaha. Markaa milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay baaraan su'aasha ah sida loo doorto xarun bamgareyneysa guri gaar loo leeyahay.
Saldhigga barkadda dacha: ma suurtagal tahay in la sameeyo nidaam la'aan
Si aad u baratid waxa saldhigga barkadda loo adeegsado siinta, sida loo doorto cutubka saxda ah iyo sifooyinka farsamada, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in iibsigu yahay lagama maarmaan.
Khubarada ayaa tilmaamaya saddex xaaladood oo aan macquul ahayn in lagu rakibo saldhigga biyaha ee bamgareynta si loo siiyo:
biyaha loogu talagalay isticmaalka guriga iyo waraabinta ayaa marar dhif ah loo baahan yahay waqti ka waqti. Uma qalanto inaad lacag badan ku bixiso haddii aad isticmaasho qalab rakibaad ah. Waa suurtagal in la sameeyo bamka la qabsasho leh ee leh otomaatiga;
la'aanta goobo gaar ah oo kulul oo ku yaal goobtii dhulka. Ma noqon doonto suurtagal in la isticmaalo qalabka farsamada qabowga;
Haddii, markaad xisaabiso, masaafada muraayadda biyaha ilaa saldhigga adigoo isticmaalaya caanaha h + 0.1 * l, halka uu ka fog yahay saldhigga barkadda illaa ceelka (m), iyo h waa miisaanka qiyaasta biyaha (m), waxaa la helaa in ka badan 8 m. waxaa lagama maarmaan ah in wax laga bedelo xuduudaha (tusaale ahaan, u wareeji cutubka ku dhow biyaha).
Dhammaan kiisaska kale, waxay macno u tahay in ay iibiso xarunta biyaha ee guriga.
Noocyada saldhigyada bamgareynta siinta nooca nuugista
Mid ka mid ah mabaadi'da kala-soocidda saldhigyada bamgareynta waa kala-tagista nooca nuugista. Waxaa jira unugyo leh dhejisyo dhejis ah iyo fog.
Iyada oo la isweydaarsanayo isku dhafan
Biyaha waxay ka soo baxaan qoto dheer ilaa 8 m. Waxaa loo isticmaali karaa ceelasha maxaa yeelay maaha kuwo xasaasiyad u ah uruurinta wasaqda. Waxay si fiican u shaqeeyaan, sababtuna waa inaadan si toos ah ugu rakibin qolka.
Iyada oo ciriiriye fog
Saldhigyada ugu fiican ee loogu talagalay dacha ee noocan ah waxay awoodaan in ay biyaha ku shubaan qoto dheer ilaa 50 m, ma ay sameeyaan qaylada, sidaa daraadeed waxay ku habboon yihiin meelaynta guriga.
Waa muhiim! Ejector wuxuu u nugul yahay inuu ku xoqo ciid iyo wasakh kale, taas oo ah farsamo weyn oo farsamo.
Noocyada saldhigyada bamgareynta nooca biyaha
Bambooyin loogu talagalay biyaha si loo siiyo, si sax ah u doortaan, sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin nooca biyaha.
Qalabka noocan oo kale, ejector wuxuu ku yaalaa top, tuubada waxaa la dhigayaa biyaha.
Tani waxay fududeyneysaa in la maareeyo lana dayactiro qalabka.
Marka la isticmaalayo qalabka noocaas ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu ilaaliyo bamka maadada. Biyaha waa inay jiifaan qoto dheer oo aan ka badneyn 9 mitir.
Mishiinka mashiinku wuxuu gebi ahaanba biyaha ku boodaa, maadaama uu leeyahay qolof aan biyo lahayn. Kala duwanaanshaha faa'iidada iyo fududeynta rakibidda. Awood u leh inuu biyo ka helo qoto dheer 10 mitir.
Noocyada xarumaha bamgareynta, iyada oo ku xidhan biyaha biyaha
Saldhigga ugu fiican ee loogu talagalay guryaha gaarka loo leeyahay waxaa lagu dooran karaa oo kaliya iyada oo ku xiran nooca taangiga.
Hayso kaydka kaydka
Si biyuhu u faafiyaan nidaamka biyaha, taangiga waxaa si gooni ah loogu rakibay qalabkiisa - waxaa ku lifaaqan dabaqa sare ama lagu rakibay saqafka. Taangadu si toos ah ayuu u buuxsamaa ka dib marka biyuhu daadinayaan. Nidaamkan waxaa lagu xakameynayaa qalab gaar ah.
Saldhigga noocan ah ee guryaha gaarka ah waa mid la aqbali karo, laakiin ka hor intaadan dooran, waa inaad ka warqabtaa faa'iidooyinka:
khatarta weyn ee fatahaadda dhismaha haddii ay timaaddo dhibaatooyin hanta;
Sababtoo ah cabbirka cajiibka ah ee weelku waxay qaadataa meelo badan;
ma shaqeynayo cadaadiska biyaha hooseeya.
Ma taqaanaa? Wadamada horumaray ee Europe, mashiinnada leh haan isku-uruursan lama isticmaali karo, maadaama loo arko in booska si fiican loo isticmaalo.
Heerka biyaha ee haanta waxaa gacanta ku haysa bateriga, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku rakibto qayb kasta oo ka mid ah guriga, oo ay ku jirto qaybta hoose, saliida, xiraha. Qalabka farsamada waxyeello ma gaarsiisan yahay. Miisaanka taangigu waa yar yahay, sidaa daraadeed waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho naqshadaynta, haddii heerka biyuhu ka sarreeyaan. Sidaa darteed, waxaad si joogto ah u buuxin kartaa biyaha ee taangiga.
Sida loo doorto rakibida mashiinka siinta
Marka aad dooraneyso qaybta bamgareynta guriga, waa in la tixgeliyo arrimahan soo socda:
nooca mashiinka (kor ku xusan). Waxay ku xirantahay fogaanshaha biyaha iyo suurtagalnimada qalabka si toos ah loogu rakibo guriga;
awooda bamka. Xisaabinta awoodda bamka ee loo baahan yahay ee biyaha loo baahan yahay waxay muujisay in qoyska caadiga ah (3-4 qof), 0.75-1.1 kW ay ku filan tahay. Haddii aan ka hadleyno kaliya xilliga xagaaga ee gaaban, markaa waxay noqon doontaa mid ku filan oo lagu iibsado xarun mini-boodh ah si loo siiyo, xulasho ballaaran oo la soo bandhigo dukaamada;
waxqabadka xarumaha. Qorshaha guriga, 0.6-1.0 mitir cubic / saac ayaa ku filan. Waa muhiim in la hubiyo in waxqabadka qalabka korontada ku habboon yahay waxqabadka ilaha biyaha (si fiican, si fiican);
awoodda taangiga. Qoys yar, qiyaastii 50 litir ayaa lagu talinayaa;
soo saaraha Shirkadaha shirkadaha sida Metabo, Gardena, Grundfos, Ergus, Marina, Pedrollo, iyo Gilex ayaa tayo wanaagsan leh.
Waa muhiim! Ha iibsan khilaafka qiimaha leh ee Shiinaha. Waxay yihiin muddo gaaban oo aan la isku hallayn karin.
kharashka Qiimaha saldhigga wanaagsan ee boosteejada waa $ 500.
Markaad dooranayso qalab farsamo, waa inaad sidoo kale fiiro gaar ah u haysataa qalabka mashiinka lagu sameeyo, habka koontaroolka, joogitaanka filter-ka soocidda iyo kontoroolka iwm. Waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la tixgeliyo dhererka sarajoogga iyo qoto-dheeraanta helitaanka dareeraha. Tuubo bixinta ayaa si fiican u doorata (ugu badnaan), isugeyn ama la xoojiyay.
Ku rakibida iyo rakibidda saldhigga bamgareynta
Saldhigga bamgareynta biyaha ee guriga iyo waraabinta beerta waxay ka kooban tahay:
bamka - Qeybta ugu muhiimsan ee farsamada ee dhaqdhaqaaqa biyaha ka soo baxa kaydka;
taangiga - Taangiyada biyaha lagu keydiyo;
koronto - wuxuu mas'uul ka yahay socodka dheecaanka ee mulkiilaha waana maamulaha bamka;
cadaadiska cadaadiska - waxay muujinaysaa cadaadiska taangiga;
nadiifinta nadiifinta - waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo farsameynta laf-dhabarka iyo hagaajinta tayada biyaha.
Ma taqaanaa? Ku rakibida xarumo bamgareynta ah ayaa la caddeeyey haddii biyaha la isticmaalo tiro yar, laakiin inta badan.
Sida saldhigga bamku u shaqeeyo dacha waxaa lagu faahfaahin doonaa faahfaahinta farsamada gacanta. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in aanad aqoon u lahayn mabda'a nidaamka, laakiin sidoo kale si sax ah u rakib.
Rugtu waxay ku taal meel u dhow ilaha biyaha. Miisaanka lagula talinayo mashiinka ilaa ceelka ama ceelka ayaa cadeeyaa soo saaraha. Haddii aad qorsheyneysid inaad isticmaasho qalabka xilliga jiilaalka, waa in lagu dhejiyaa qol diirran oo leh hawo wanaagsan si aysan qalabku u soo ururin kondensate. Dhammaan tuubooyinka waa in ay ka hooseeyaan heerka uu carrada ku qaboojiyo qabowga.
Dhegeysiga talo-bixinta khabiirada, si fudud ayaad u dooran kartaa xarun bamgareynaysa si aad ugu noolaato guri aad u deggan.